I-Apartment # 2 - kwiziko le-8 min
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguNara
Ifulethi eliNtofontofo elisanda kulungiswa kunye neBhedi yoBubungakanani beKumkanikazi eyi-160x200cm / 60" X 80" kunye noomatrasi olutsha lwaseTaliyane iFriuliflex (jonga imifanekiso); yonke ifanitshala entsha, i-Air Conditioning, umgangatho owenziwe ngomthi wom-oki, i-50Mbps ye-intanethi, icoceke kakhulu inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Sikwabonelela ngeziseko zokupheka (iswekile, ityuwa, ioyile, ipepile njlnjl) ekuqaleni kokuhlala kwakho ukuze ungabi naxhala malunga nezi zinto zibalulekileyo xa ungena. Intambo yeTV ye-HD enamajelo angama-86 afana ne, CNN, BBC, Discovery kunye nabanye abaninzi.
IApartment yi-55m². Yindawo ephangaleleyo kwaye enelanga.
4.90 ·Izimvo eziyi-69
4.90 · Izimvo eziyi-69
Kwicala lasekunene (50 yeemitha kude) kukho ivenkile encinci yasekuhlaleni apho unokuthenga ukutya okwahlukeneyo. Kwicala lasekhohlo (250 yeemitha kude) inkulu iSupermarket Zovq esebenza 24/7. Kukwakho neendawo zokubhaka, iivenkile zeKhemesti ngaphakathi kweemitha ezingama-300 ukusuka kwindlu.
Umbuki zindwendwe ngu- Nara
Ndihlala kwisakhiwo esinye kwaye ndihlala ekhaya. Iyafumaneka kwiselula yam nanini na iindwendwe ziya kufuna uncedo lwam. Singakucebisa ngeyona ndawo yokuya kuyo yokhenketho lwabucala eArmenia( ukuquka imigama, amaxabiso) kwiSUV.